Ciidamadii Puntland ee ku sii jeeday Qandalla oo lagala hor yimid qaraxyo iyo dagaalo – STAR FM SOMALIA
Ciidamada maamulka Puntland ee duulaanka ku qaaday xoogaga Daacish ee qabsaday degmada Qandalla ayaa lagu soo waramayaa iney la kulmeen qaraxyo iyo iska caabin.
Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo) oo hogaaminaya weerarka ku wajahan Qandala ayaa sheegay in saaka dagaal uu dhexmaray ciidamada maamulka iyo maleeshiyada Daacish.
Dagaalka ayuu sheegay inuu ka dhacay dhul buuraley ah oo ku wareegsan degmada Qandalla ayna dileen 7 maleeshiyo ah oo ka tirsan kooxda Daacish kuwaasoo uu xusay iney hayaan meydadkooda.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxyo miino oo dhulka lagu aasay lala beegsaday gaadiid dagaal oo ay wateen ciidamada Puntland uuna jiro khasaare soo gaaray ciidamadaas.
Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo) ayaa qiray jiritaanka qaraxyada lala beegsaday ciidamada Puntland wuxuuna xusay in saddex askari ay kaga dhaawacmeen.
“Iska caabin weyn oo ciidamada Puntland lagala hor yimid ma jirto, waxaana rajeynayna inaan gacanta ku dhigno Qandalla kana saarno argagxisada soo weerartay” ayuu yiri Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo).